Iivalvu zesixhobo, iziFakelo, ukuDityaniswa kweNkqubo yeFluid - CIR-LOK
Iityhubhu kunye neeHoses eziguquguqukayo
Iisampulu zeSilinda kunye neembiza zeCondensate
Iigeyiji zoxinzelelo eziguquguqukayo zoMmandla wokuqukuqela kunye neeSyphons
Uxinzelelo oluphezulu kakhulu
Inkampani ngoku ikhule yaba liqumrhu lehlabathi eliyila, liphuhlisa kwaye lenze amawaka eemveliso kunye neenkonzo ezikumgangatho ophezulu. Iqela lobugcisa liqokelele ubutyebi bamava kumashishini afana nokuvelisa amandla, i-petrochemical, igesi yendalo kunye ne-semiconductor Industry.
Zonke iimveliso ze-CIR-LOK ziphantsi kweenkqubo zolawulo loqinisekiso lomgangatho ongqongqo kuzo zonke izigaba zokusetyenzwa kwee-odolo, ukuyila, ukuvelisa, ukuvavanywa kunye neziqinisekiso zokuqinisekisa ukuba ezi mfuno zingundoqo zabathengi ziyafezekiswa.
E-CIR-LOK, silwela ulwaneliseko olupheleleyo lwabathengi bethu. Imibuzo yakho iya kuphendulwa kwiiyure ezingama-24. Iqela lethu linabasebenzi abanolwazi lokuphendula imibuzo yakho ngokukhawuleza. Ukuhanjiswa ngokukhawuleza ngundoqo kwimpumelelo yakho.
Injongo endlongondlongo ye-CIR-LOK kukuziseka njengenkokeli yoshishino nokwandisa isabelo sethu semarike. Oku kugcinwa kuwo onke amasebe ngaphakathi kwintlangano. Iinzame zethu ezipheleleyo ziya kukukhusela ekuphulukaneni nomntu owenza ishishini lethu libe lonwabe kwaye liphumelele kubo bonke ababandakanyekayo.
Iivalvu zoNcedo oluLungelelwano
Ufakelo lweTwin ferrule Tube
Izixhobo zoMbhobho woFakelo
Izixhobo zeMetal Gasket Face Seal
Izinto ezincinci zeBut-Weld
Iivalvu zoxinzelelo oluphantsi, iziFakelo kunye neTubing
Iivalvu zoxinzelelo oluphezulu, iziFakelo kunye neTubing
Iivalvu zoxinzelelo oluphakathi, iziFakelo kunye neTubhing
Abalawuli abaNciphisa uxinzelelo
Ulawulo loxinzelelo lweenqanaba ezimbini